Qaramada Midoobay oo ku baaqday in la baaro xasuuqii GAZA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Qaramada Midoobay oo ku baaqday in la baaro xasuuqii GAZA
Madaxa hay’ada Xaquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xasuuqii ka dhacay deegaanka Gaza ee Falastiin, isniintii lasoo dhaafay ay ahayd danbiyo ka dhan ah xaquuqul insaanka iyo shuruucda caalamiga ah.
Zeid Ra’ad al-Hussein oo ah Madaxa hay’ada Xaquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dilka in ka badan 60 Falastiiniyiin ah oo ay Israel geysatay ay ka horimaaneyso sharuucda caalamiga ah.
Kulankan ka dhacay xarunta UN Human Rights Council ayaa sheegay in baaritaan lagu sameyn doono dilalka ay ciidamada Israel u geysanayeen Falastiiniyiinta mudaharaadka ka waday Gaza lixdii todobaad ee lasoo dhaafay.
“…Falalkan waa kuwo si toos ah uga horyimaanaya sharuucdii Geneva..” ayuu yiri Zeid Ra’ad.
Dalalka Islaamka ayaa sidoo kale olole ka wada Qaramada Midoobay si guddi baaritaan arrintan loogu saaro, qoraalkaasi oo ay soo diyaarisay dowlada Pakistan oo maanta oo Jimce ah la hordhigayo Qaramada Midoobay ayaa waxaa sidoo kale taageersan 47 wadan oo kale.